Wuhan Pixel Box Cinema Sinima - Imewe Mmewe
Sinima “Pixel” bu ihe nlere bu ihe okike, ndi mmebe na-enyocha mmeghari nke mmeghari na pixel iji buru isi ihe okike a. A na-etinye "Pixel" n'akụkụ dị iche iche nke sinima. Igbe ezi nke ụlọ ebe a na - arụ nnukwu ụlọ na - acha uhie uhie mepere emepe nke ihe karịrị 6000 iberibe nchara anaghị agba nchara. A na-achọ mgbidi ngosipụta nke ihe ngosipụta ya na nnukwu akụkụ nke mpe mpekere onwa site na mgbidi na-eweta aha na-adọrọ adọrọ nke sinima. N'ime sinima a, onye ọ bụla ga-anụ ụtọ nnukwu ikuku ụwa dijitalụ nke a rụpụtara site na njikọta nke ihe niile “Pixel”.
Aha oru ngo : Wuhan Pixel Box Cinema, Aha ndị na-emepụta ya : One Plus Partnership Limited, Aha onye ahịa : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..
Sinima One Plus Partnership Limited Wuhan Pixel Box Cinema